Tsy matahotra sazy marina moa koa!
2010-02-28 @ 19:06 in Spaoro
Nisy ny namana nalahelo mihitsy fa lasa tsy niresaka baolina fandaka intsony ny tena, rehefa nisy ity krizy mbola haharitra an-taonany ity (miala tsiny aho raha mahatezitra anao fa moa tsy mizotra ho amin'izany moa isika izao?). Mpankafy io taranja iray io ny tena ary vitsy (raha tsy hoe izaho irery) ny malagasy mamaham-bolongana resaka baolina fandaka izany nialoha ny taona 2009. Tsorina kosa aloha fa tena tsy any mihitsy ny saina amin'izao fotoana izao, ary zavatra hafa mihitsy koa moa no laharam-pahamehana androany izay. Saingy mba hiserana kely aho amin'ity indray mitoraka ity.
Raha hilaza aho hoe hiserana kely dia aleo mitsotra dieny ety amboalohany fa tsy nijery baolina aho... na dia nisinisy ihany aza ny dokambarotra sy ny fanentanana, ary mety ho eo ihany koa ny fanantenana amin'ireo mpitia fanatanjahantena hoe raha niova ny mpitondra dia hiova ihany koa ny filalaon'ny ekipa malagasy ka handresy ho tafakatra dingana avoavo vao mety ho raraka. Ho diso fanantenana avy hatrany aloha raha izay no ao an-tsaina fa tokony hoe hanala azy amin'ny antonony (am-pahamendrehana) na hiala voly ao anatin'ity fiainana gidragidra ity. Betsabetsaka ny olona nanatrika ireo lalao famerenana dingana savaranonando eo amin'ny sehatra afrikana (izany hoe tsy dingana voalohany akory) teny amin'ny kianjan'i Mahamasina fa tsy anisany aloha ny mpanoratra. Fa matoa nanoratra dia noho ny savorovoro teny amin'ny kianjan'i Mahamasina nandritra ny lalao ny alahady 28 febroary 2010.
Ny resaka eto izany dia miainga avy amin'ny hita na nasehon'ny MaTV nandritra ny vaovaom-panatanjahantena. Nanantena fandresena ny mpijery kanjo ny vahiny indray no nahatafiditra ny baolina voalohany, 8 mn monja taorian'ny fanombohan'ny lalao tamin'ny alalan'ny daka anjoro izay lesoka lehibe ho an'ny Malagasy mandrakariva. Niakatra ny maripana teo amin'ny mpijery ka nampisy gidragidra madinidinika teo amin'ny mpijery vitsivitsy sy ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny gradins. Rehefa resy moa amin'ny ankapobeny ny olona tsy mety miaiky fa misy tsy fahaizan'ny mpilalaony na hoe misy lesoka avy aminy fa ailiny amin'ny hafa mandrakariva ny fahadisoana. Dia hitan'ny mpijery tamin'ity mpitsara anjorony Sheisheloà (izany hoe avy amina firenena mpikambana aoamin'ny SADC raha tsy diso aho) izany rihitra izany. Io no nitoratorahan'ny mpijery tavoahangy ka nampiatoana ny lalao mihitsy aloha ka nidiran'ny mpilalao roa tonta tany amin'ny efitra fisoloana akanjo. Ny nampihomehy dia niala teo amin'ny "rihana" voalohany avokoa ny mpijery fa niakatra teny amin'ny "rihana" faharoa. Miala ilay toraka tavoahany io. Rehefa misy ny toraka tavoahangy tahaka ireny raha etsy Mahamasina dia misy amany izay ao anatiny.
Rehefa tonitony vetivety ny mpijery dia niverina teny ambony kianja indray ny ekipa roa tonta sy ny mpitsara. Vao nitsoka ny kiririoka fanombohana indray ny mpitsara dia velona indray ny toraka tavoahangy andiany faharoa. Manala ny fony eo ny mpijery raha ny fieritreretana izany satria resy daholo na hoe raraka daholo izany ny solontena anankiroan'ny Malagasy eo amin'ny sehatra Afrikana. Niato atsasak'adiny mihitsy indray aloha ny lalao vao novitaina hatramin'ny farany. Mazava loatra fa efa maro ny mpijery no nody teo anelanelan'izany fotoana izany. Nifarana tamin'ny isa iray noho ny telo izay faharesen'ny tompontany moa ny lalao. Koa aiza indray no tiako ahatongavana sy nahatonga ny lohateny?
Voalohany: tsy hoe eto amintsika ny lalao no atao ka hoe manana ny fiandrianam-pirenentsika isika sady masi-mandidy eto amin'ny tanintsika. Tsia, rehefa lalàna iraisam-pirenena dia lalàna iraisam-pirenena. Io lalàna iraisam-pirenena io no hajaina rehefa iraisam-pirenena ny lalao. Rehefa resy angaha na tsy mbola tonga amin'ny fetra aza ny lalao dia hoe ravao any io? Lalàna na fifanarahana mitoetra eo amin'ny mpifidy ny ny nofidiana ny fe-potoana voasoratra. Tsy hoe tsy tianao ny nataon'ny mpitondra dia avy koa ianao hoe ravao any io na hoe ataovy izay haharava io? Rehefa naharava ilay lalao tsy tamin'ny fotoana ianao dia efa manampoiza sazy mifandraika amin'izany. Tsy maintsy fantarina ianao nandrava lalao io ary samborina sy saziana rehefa avy eo.
Faharoa: satria manko atao litania mandrakariva amin'ny haino aman-jery ny hoe aleo voasazy, aleo voasazy toy izay hiverina amin'ny efa nifanarahana tsy an-tery, dia hain'ny mpijery tokoa ny mampihatra izany eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena, fa tsy eo amin'ny sehatry ny politika irery ihany. Fantatra izao fa mahavoasazy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny mandika lalàna ka manakorontana ny fizotry ny lalao dia mbola natao ihany izany ho fanalana ny fo feno fahatezerana. Tsy mampiova na inona na inona anefa izany natao izany fa mbola fanampiana ny fanorisorenana ny tena ihany... indrindra raha tsy mankasitraka ny gidragidra tahaka ireny izay nanatrika teny. Dia manampoiza ary ho voasazy fa aza ny hafa no endrikendrehana ho anton'izany sazy izany avy eo fa kitoatoa nataonao ihany no niaviany.
Farany: Eo amin'ny resaka sazy dia lasa lavitra avy hatrany ny saina. Hakatona ve izany ny kianjan'i Mahamasina? Sa ny ekipa no handoa onitra noho ny tsy mety nataon'ny mpijeriny? Dia niitatra ny eritreritra hoe sao dia nisy nanozona kosa tahaka ny ozona nataon'i Kristy tamin'ilay aviavin'i Betania maina vetivety teo hoe :"Rehefa akatonao amin'ny hetsiky mpitondra fivavahana io kianjan'i Mahamasina io dia aleo hikatona mihitsy (mandritra ny taona maro!)". Dia ho inona izany no hampiasana azy sisa? Fa aleo tsorina ny resaka: misy dia misy ny maniry ny hikatonan'ny kianjan'i Mahamasina tsy ho azo anaovana na inona na inona... sady tsy tokony hanaovana matso amin'ny 26 jona ihany noho ny didim-pitondrana izay navoaka... sa ho "exceptionnel" amin'io fotoana io? Izay tiany atao ihany io ka!!!
jentilisa, 28 febroary 2010 , Antananarivo 21:12
2010-02-25 @ 22:53 in Politika
Eto ampanombohana aho dia mankasitraka indrindra ireo Malagasy any ampitan-dranomasina tsy sasatra mihitsy ny manadihady sy miady hevitra amin'ny zavamisy eto Madagasikara. Ianareo amin'ny ankapobeny no toy ny mpanetsika anay mpikatroka aty an-tanindrazana mety ho valaka indraindray mahita ny heverina ho tsy firaharahiana ataon'ny sarambamben'ny olona. Raha in-telo andro misesy izay Atoa Ravalomanana no niantso tamin'ny finday ho ren'ny mpandala ny ara-dalàna (ny satan'ny maputo sy ny tovana tany Addis Abeba) dia torohevitra ankolaka izany ilazana fa aty an-tanindrazana indray izao no tokony ho kianja ifaninanana sy ezahina fehezina ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Raha tarafina manko dia tahaka ireny hoe matoky tena ireny ny mpifehy ny fahefana amin'izao fotoana izao ary tahaka ireny hoe efa roso ity tsa mimpody intsony, dia resaka saikolojia no tena ambadika ary tsy tokony ho lavon'izany ny aty amin'ny mpandala ny ara-dalàna eto an-tanindrazana.
Eny amin'iny faritra Andavamamba iny manoloana indrindra ny fiangonana ara-pilazantsara dia misy irony takelaby be velarana fametrahana dokambarotra irony. Ny tonga dia misongadina amin'ity takelaby ity moa dia ny famantarana ny repoblika malagasy mivolombolamena ahitana ny sarina ravinala, sy lohan'omby. Dia voasoratra tsara fa hoe averina amin'ny vahoaka masi-mandidy ny fahefana... tsy tena tadidiko intsony ny tohiny fa mifanahatahaka amin'ny hoe amin'ny fanaovana fifidianana solombavambahoaka. Dia lasa ny saiko...Eken'ny mpitana ny fahefana ankehitriny ve raha misy olona na vondron'olona mametaka ny heviny amin'ireny takelaby fandoavam-bola ireny koa manao hoe Arosoy ary ny fifidianana filoham-pirenena hitsapana ny fitiavan'ny olona anao? Raha tena sahy izy dia izay idirana fa be no ho faly amin'ny ankolafy rehetra sy ny ivelan'ny ankolafy.
Hiantso hiresaka hoe?
Tena zavatra mahafinaritra indray izany hoe mandre teny avy amin'ny lohan'ny mpitana ny fahefana miantso indray hifampidinika indray, eny fa na dia tsy noraharahiana aza izay efa nifampidinihana sy nanaovana sonia mihitsy tamin'ny herintaona. Saingy aoka tsy hofitapitahana ka hoe ny hanatontosana ny fifidianana no hanaovana izany fifampidinihana izany, tena andrasana mihitsy anie ilay fifidianana fa mba iarahana manatontosa ny fanantanterahana azy e! Ny dikan'ny fiaraha-mitantana efa nifampizarana, ary tsy mbola nandramana akory dia lazaina sahady fa tsy nahomby, dia ny hahamarin-toerana izany fifidianana izany. Noho izany, efa vita avokoa ny dinika mankamin'izany fifidianana izany ka tsy ilàna fifampidinihana indray... ny fandrafetana ilay rafitra iraisana efa nifanarahana tany Maputo sy Addis Abeba izay hofaranana amin'ny karazam-pifidianana no efa vokatry ny dinika... fa ny fanatanterahana azy sisa... dia io mbola mampikatso ny zava-drehetra io izao.
Resaka radio eto amin'ny tanàna
Rehefa misy ny resaky ny radio anankiray milaza fa niteny izao hoe na niteny izaroa ny radio iray hafa izay mifanohitra firehana aminy indrindra indrindra dia vaovao diso tanteraka izay no lazainy fa nambaran'io radio mifanohitra firehana aminy io ary ao anatin'ny famafazan-dainga sy ny fiampangana lainga izy izay. Hahatsotra ny resaka, tsy ilaina manonona ny anaran'ny radio fahazavana ny radio antsiva sy ny radio viva, dia tahaka izany ihany koa tsy ilaina manonona ny anaran'ny radio viva na/sy ny radio antsiva ny radio fahazavana. Miala tsiny fa misy radiom-piangonana moa voatonona... ary fantatro tsara fa tsy milaza izay lazain'ny radio hafa mihitsy ny iray amin'ireo radio ireo nefa misy kosa ny tsy mitsahatra ny mamelively ny radio hafa. Fehiny: raha misy izany radio na televiziona iray miteny hoe izao no lazain'ny radio na tele izao na hoe izao no re tamin'ny resaka nifanaovan'ny mpanao gazetin'i ... tamin'ny mpanao politika ranona... nefa ireo teneniny ireo dia mifanohitra firehana aminy dia mahimahiana fa mety hisy lainga ao anatin'izay. Ny tena mampanahy aza, araka ny notakariko tao amin'ny paikady miaramila maoderina nadikako vao tsy ela tao amin'ny Global Voices Online teny malagasy, dia paika entina handrisihana ny olona hanao "valifaty" mialoha ka manosika azy hanao ny tsy mety toy ny fandrobana fananan'olona, famonoana na fandratrana olona ahafahana mangeja tanteraka ny olon-drehetra no ao ambadik'ireny famafazana lainga fampiadiana olona ireny.
Asa raha tsikaritrareo fa toa kamokamo izay ihany ny tena manoratra etoana fa satria moa aty an-tanindrazana indray izao no sehatra dia aleo tairina ny rehetra, saingy tsy ho amina fanaovana herisetra eo amin'ny samy olona na oviana na oviana.
Jentilisa 26 febroary 2010 amin'ny 01:01 eto Antananarivo
Ny zoko tsy hitovy hevitra aminao
2010-02-06 @ 11:14 in Politika
Efa ela aho no te-hanoratra ho anareo saingy sampona mahazo ny fahakamoana hampita ny hevitra indraindray. Mbola ao anaty krizy koa angaha hany ka raha manana hevitra tsy iraisana amin'ny besinimaro loatra dia heverina ho mpamadika avy hatrany. Efa zatra ny nanoratra ny hevitro aho ka mitandro hatrany ny fahafahako miteny amin'ny alalan'ny bolongana angaha. Be ihany ny hevitro no toa notanterahina ihany am-bolana manaraka. Tojo firehana misedra na mifanohitra ny an'ny besinimaro indray ny tena ankehitriny... nefa tsy ataoko ho sakana velively raha hifanohitra izay mety ho hevitrareo ny soratako etoana.
Izay no ela fa dia atao toy ny donak'afon'Analakely izy ity ka avy hatrany dia any am-bovonana. Mpitandro ny fandriampahalemana araka izay fetran'ny azo atao aho, efa tsinjonareo amin'ny fomba fanoratro ihany. Tsy te-hahita olo-tsotra tra-boina toy izay nitranga tamin'ny 7 febroary 2009 intsony aho... ka hoe tsy raharahiana intsony ny ain'olona noho ny fitiavam-pahefana sy voninahitra ary seza, na an'iza izany na an'iza. Mazava loatra aho raha nankasitraka ny Loa-bary an-dasy notanterahina tetsy amin'ny Carlton Anosy tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Fitadiavam-bahaolana hanerena ny ankolafy efatra hifampidinika hampandeha ny tetezamita hizorana amin'ny Repoblika tsy misy ra mandriaka intsony no atao, raha mbola azo atao ihany koa izany. Nahoana no andrandraina ny hiavian'ny tafika vahiny raha mba mety ho voavaha eto an-toerana ihany ny olana? Saingy maro loatra no tsy te-hahalala intsony izay fitadiavam-bahaolana avy amina Malagasy... ary lazaiko indrindra ny mpanao politika avy amin'ny ankolafy efatra mihitsy ka tsy niraharaha izay antso ho amina fifampidinihana izay.
Fijeriko dia te-hijoro ho toy ny "ray aman-dreny" te-ho ambonin'ny fironana misy tokoa Atoa Fetison Rakoto Andrinirina, raha nandray iny fanapahan-kevitra iny, ary mametraka fa mendrika azy tokoa ny nanendrena azy ho filoha mpiara-mitantana, izay nanasa na dia ireo mpifanandrina aminy ara-politika aza. Lalana nankany amin'ny tetezamita iraisana tokoa no nokasainy, saingy ny omby indray mandry moa tsy indray mifoha. Tsy nahay nanararaotra iny fotoana tokana nampananontanona ny fahitana vahaolana iny ny ankamaroan'ny mpanao politika malagasy fa nifampibaiko tsy hisy hahazo manatrika ny fotoana sy ny filazana fa tsy manaiky ny hanatontosana iny hoe ny lehibe no naverimberina. Tsy nisy nandre mivantana izany baiko izany ka manahirana ny mieritreritra azy. Atao ahoana moa fa dia izay izany no izy. Noho izaho mpandala ny tsy fampiasana herisetra dia tsara amiko ny fanapahan-kevitra toy ireny fa tsy manao toy ny rafotsibe very laona ka hiandry izay igadonany. Tsy vahaolana mihitsy ny tsy fandraisana andraikitra. Hatreo ihany aloha.
Jentilisa, 06 febroary 2010 amin'ny 13:19